Abaphathi Bomhlaba Nabakhi Bezakhiwo banikela ngamathuba amahle kakhulu otshalomali emakethe yeDynamic Real Estate Market. Sikhonza i-Value Client Base yethu ezweni lonke phesheya kwezilwandle eminyakeni eyishumi edlule. SineProfessional Realtors Team ezinikele ekuhlinzekeni ubuhle ekubonisaneni nabakwaReal Estate Services. Singumthengisi ogunyaziwe wawo wonke ama-Projects aseBahria Town kufaka iBahria Orchard. IBahria Orchard - izwe lesitayela nomhlali kanokusho - amakhaya angcono kakhulu ongawathola ePakistan, lapho yonke iyunithi iluka okwakamuva ngokunethezeka futhi ikuvumela ukuthi uphile indlela yokuphila yokuzijabulisa kakhulu nge-fairytale ezungezile. Isikimu Sezindleko Eziphansi eBahria Orchard Lahore sihlanganisa ikhwalithi, ubuhle kanye namazinga aphesheya ukunikeza ukunethezeka kwempilo kubahlali bayo. Izindleko eziphansi, izindawo zokuhlala ezikhethekile ze-5 8 Marla zisendaweni ephambili. Inikeza umuzwa wezindawo zokuziphilisa ezizisekelweni ezisezingeni lomhlaba ngempela. Njengokungabizi njengoba umuntu ovamile angakwazi ukukukhokhela, lokho kwenza iBahria Orchard ifane nesiza sezindlu esinamanzi esidlangalaleni ngenkathi indawo ikwenza kukholwe ngokwengeziwe njengoba umuntu engangena kuso kalula kusuka kuMain Raiwind Road naseRing Road yaseLahore. Imigwaqo ebanzi okungukuthi i-40 Ft, 50 Ft, 60 Ft kanye ne-80 Ft ihlinzeka ngohambo olulula. ILahore Airport DHA: 15-20 Minuets ngeRing RoadShaukat Khanum Hospital: 15 MinuetsSundar Multan Road: 10-15 MinuetsThokar Niaz Baig: 15-20 MinuetsImigwaqo ebanzi okungukuthi i-40 Ft, 50 Ft, 60 Ft no-80 Ft inikeza ukuhamba okulula IBahria Orchard: IBahria Orchard Lahore iyintuthuko yesikhathi esizayo kakhulu eLahore uqobo, enikeza izakhamizi zayo ingqalasizinda esezingeni lomhlaba jikelele, izinsiza zezinsiza. IBahria Orchard Lahore ifaka konke okunikela endleleni yokuphila yamaLahori futhi iveza amazinga womhlaba wonke kuyo yonke imikhakha yempilo kubandakanya ezokungcebeleka, ezentengiso nezokuhlala. Lo mphakathi wezindlu uhlinzeka izakhamizi namanye amaLahorites ngokufanayo ngezindawo ezinhle kakhulu uma kukhulunywa ngezikhungo zezohwebo, izindawo zokuzijabulisa nemisebenzi yokuzilibazisa. Ukuhlwaya nokuhluma kwamasimu aluhlaza, ukuhleleka okuhle kwezihlahla zezithelo, umhlaba ohlanganisa ikhava yezimbali eziphuzi kanye nezinsiza zesimanje ziqinisekisiwe ukuthi sikulangazelela kaningi ukuhlala ezweni. Bekulokhu kungumbuzo wokukhetha phakathi kwezindlela zethu zokuphila zanamuhla nezifuna ngenkani nobuhle bezithelo zemvelo. Ukufaka iBahria Orchard ngendlu yesango elimangazayo. Isango lokungena kwe-boulevard lizihambela ngokwalo epaki enetimu enhle. Umoya opholile nopholile uhlale ucindezela ingqondo yakho nomphefumulo wakho futhi ukumema ukuthi ukujabulele ukuthamba kwemvelo. Yakhelwe njengomphakathi wenkundla yegalufu; IBahria Orchard ifakwe endaweni yokuhlala eluhlaza okwemvelo. Umkhakha ngamunye wabelana ngezinsiza ezisezingeni eliphakeme namamayela emigwaqo yokugijima namabhayisikili. IGalofu kanye neKlabhu Yezwe kuzohlinzeka ngezitebele zokugibela kanye nenkundla yomqhudelwano wegalofu lobulembu elinemigodi eyishumi nesishiyagalombili. Izinyoni nezilwane zohlobo olubizayo futhi olungajwayelekile kanye neGalofu Course zijabulisa izivakashi kulo mphakathi ojabulisayo. I-Medical Complex enezitezi eziningi iqinisekisa ukushesha kokusebenza ngaphakathi kwazo zonke izindawo ezibalulekile zosizo lwezokwelapha ngokuzungeza isikhungo sokuhlukumezeka kwezinsizakalo ze-ambulensi. Izinsiza ezinikezwa yiBahria Orchard: • Igolide Class Theatre • Izindawo zokudlala imidlalo • Inkantolo yokudla, izindawo zokudlela ezitolo zokudla • i-Zoo, iMini Golf Course, i-Swimming Pool, i-Skating Ring, i-Snooker Club Tennis Courts • Isibhedlela, i-Clinic ne-Health Club • iMasjid, iPaki, i-landscape kanye izikhumbuzo ebhulokini ngalinye • Isikhungo Somphakathi • Izinsimbi Zokudla • Indawo Yokudlala Yezingane • Izembatho Zomklami • Amasayithi abelwe Izikole, Amakolishi namathuna. IBahria Orchard imemezele izigaba ezi-4, kepha izigaba zephrojekthi 1, 2 zidume kakhulu emibuthanweni yabathengi bezakhiwo. IBahria Orchard inikezela ngamafulethi azimele ayathengiswa i-1 namakamelo okulala amabili. Noma kunjalo, izinketho zombhede ongu-1 zikhawulelwe. Uma kukhulunywa ngeziza zokuhlala, iBahria Orchard inikeza osayizi abaningi, edume kakhulu ngama-marla ama-5 no-10, kanye neziza eziyi-kanal eziyi-1. IBahria Orchard Phase 1 ihlukaniswe ngamabhulokhi amane aqanjwe ngokuthi iSifunda SaseNyakatho, Isifunda SaseNingizimu, Isifunda Esimaphakathi Sesifunda SaseMpumalanga. Isifunda Esimaphakathi yindawo ephambili yeBahria Orchard iyindawo esemqoka yeSigaba 1. Ngakolunye uhlangothi iSifunda saseMpumalanga sihlukaniswe ngamamitha angu-80 ububanzi Umgwaqo phakathi. Ngakolunye uhlangothi umgwaqo ongamamitha angu-200 ububanzi ohlukanisa isifunda saseNyakatho nesiFunda Esimaphakathi. Ohlangothini olungaphambili iBlock of 1 kanal Villas Northern District itholakala eduze kweCentral. Indlela eqonde ngqo kuRaiwind Road idlula ngomgwaqo obanzi ongu-200, iseduze nendawo yezentengiselwano yeSigaba 1. Ukusikwa kwesiza kungenxa yezindawo zokuhlala eziyi-1 Kanal 10 Marla. Isifunda saseMpumalanga sisehlangothini lwesokunene lokungena okuyinhloko kweBahria Orchard Phase 1 ngemuva nje kwenkundla iMini Golf. Iqukethe ama-5 Marla, ama-10 Marla 1 Kanal okusika izindawo zokuhlala nebhande leziza zentengiso ngaphambili. INkantolo Yezokudla nayo iyingxenye yaleli bhulokhi. Isifunda esiseNingizimu siseduzane nesifunda saseMpumalanga. Le Block inikeza ama-8 Marla, 10 Marla 1 kanal iziza zokuhlala. IBahria Orchard Phase 2 I-Bahria Orchard Phase 3 yindawo ekahle yabathengi abafuna ukwakha ikhaya elisha endaweni enothe ngephrojekthi yiBahria Town Private Limited. Kutholakala kuMain Raiwind Road, ngaphesheya komgwaqo osuka eBahria Orchard Phase 1 kanye neSigaba 2, le phrojekthi iqukethe izindawo zokuhlala eziyi-8 kuphela. IBahria Orchard Phase 4 itholakala eduze kwesigaba 3 kuMain Raiwind Road. Ukushintshana okuseLahore Ring Road okuseduze kuthembisa ukufinyelela kalula ezikhungweni ezinkulu zedolobha. Zonke iziza zisendaweni eseBahria Orchard Phase 3. Umhlaba udluliselwe kubanikazi bamafayela. Izintengo zamanje zezakhiwo azilungele nje ukwakha ikhaya lakho elisha kepha zilungele nokutshalwa kwezimali kwesikhashana. IBahria Orchard Phase 4 IBahria Orchard inikeza umphakathi ophephe ngokuphelele futhi onamasango. Umphakathi ubhekwa inethiwekhi ye-CCTV eyinkimbinkimbi futhi uphathwa onogada abaqeqeshiwe abaqeqeshiwe be-Bahria Security. Ngemininingwane engaphezulu ngale ndawo sishayele izinombolo ezibaluliwe futhi nganoma yikuphi ukuhlolwa kweZindlu, Iziza Zezentengiselwano Zempahla Yokutshalwa Kwezimali, Inhloso Yokuhlala uzizwe ukhululekile ukuxhumana nathi: Shayela / Yini uhlelo lokusebenza / i-imeyili 24/7.
Xhumana nomkhangisi +92320460xxxx